Ayarendi - ALinks
Chii chiri Ireland visa zvinodiwa?
February 7, 2021 Maitri Jha Ayarendi, vhiza
Unoda kuenda kuIreland? Iwe uchazoda vhiza yeiyo. Ireland inzvimbo yekushandisa zororo. Gore rega rega vashanyi vazhinji vanoshanyira Ireland. Zvishamiso zvepanyama zvakaita seMakomo eMoher zvinokwezva mushanyi kubva mhiri
Kunyorera Nzvimbo Yeupoteri MuIreland? Heino tsananguro pfupi !!
Dai 12, 2020 Shubham Sharma Ayarendi, vapoteri
Uri kuenda kuzogara kuIreland here kana kuti uchida kupotera muIreland? Pane mamwe magwaro aunofanirwa kutakura paunenge uchinyorera hupoteri. Mumwe anogona kunyorera hupoteri chete kana iwe uri muIreland. Ireland ndizvo